Taxi, Tuk Tuki. Renirano renirano sy Sangteo any Thailand ~ Journey-Assist + Taxi renirano, sambo
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Transport. For rent. » Taxi. Fandondona mandondona. Sangteo. Renirano renirano (sambo). mototaksi
Taxi, mandondona sy sangteo any Thailand
Taxi any Thailand
Ny ankamaroan'ny taxis any Thailand dia mifindra ao an-tanàna, fa afaka mitety ny firenena ianao raha maniry, na, ho any amin'ny seranam-piaramanidina ivelan'ny tanàna.
Ny taxi iray ho azy dia mazava ho azy no lafo kokoa noho ny fiara fitateram-bahoaka na fiaran-dalamby, fa TSARA raha toa ka mandeha mitety orinasa ianao ka mizara ny fandoavam-bola, dia afaka manamarina ara-toekarena mihitsy ny fitsangatsanganana :).
Mikasika ireo fanakorontanana, ho azo antoka ny manaiky ny vidiny miaraka amin'ny mpamily fiarakaretsaka mialoha (aza adino ny hiantsena, izany dia Azia 🙂), ary raha tsy voalaza fa ho ela ny lalana, dia mahasoa raha mampiasa taxi-by misy metatra.
Antsoina hoe Taxi Meter io anarana io. Azon'izy ireo fantarina amin'ny anarana mampiavaka voasoratra ao amin'ny taratasim-by taxi iray ary indraindray eo anilan'ny fiara. Ny mampiavaka azy ireo dia ny fisian'ny mpifaninana iray fotsiny. Aza hadino fotsiny fa ny mpamily fiarakaretsaka dia aleony tsy mampiasa an'io metaly io, ka raha te-hisotra ara-drariny ianao, dia tokony hanaiky hampiasa mialoha ilay metatra ianao. Na dia amin'ny tranga mampiasa metatra aza, dia miomàna hanao lalana hafa sy haingo kokoa :). Na izany aza, toy ny izao tontolo izao.
2. Taxi tsy miankina
Betsaka ny orinasa tsy miankina ao Thailand. Misy ny famandrihana voafetra amin'ny tanàna na faritra sasany, misy ny famindrana, ary misy ireo manana sampana maro manerana ny firenena. Amin'ny maha-fitsipika azy, izy rehetra dia afaka baikoina tsy amin'ny telefaona ihany, fa amin'ny alàlan'ny Internet ihany koa, ary amin'ny fampiasana iraky ny iraka (Viber, WhatsApp). Amin'ity lafiny ity, tsy manadino ny planeta iray manontolo i Thailand. Ary tena mety!
Aseho eo amin'ny tsenan'ny fiantsonana tsy miankina eto Thailand, ary mihalehibe izao tontolo izao toy ny Amerikana Uber sy Singaporean Grab Taxi, izay fako lehibe raha oharina amin'ny serivisy taxi eto an-toerana. Ny fitsangatsanganana miaraka amin'izy ireo (indrindra ny firaisana ara-nofo) dia mety mihoatra ny 25 isan-jaton'ny mora kokoa. Fa samy olona tsirairay, mazava ho azy. Amin'ny fomba, manerana ny firenena Grab Taxi с 2018g nividy serivisy Uber. Ka tsy azo alaina intsony i Uber any Thialand.
fanompoana Grab Taxi, Ampiasaina mavitrika any amin'ireo firenena any Azia Atsimo Atsinanana izy ireo, noho izany dia manoro hevitra izahay fa raha tsy mifandray aminy ianao dia aleo mba itsiahivana, farafaharatsiny, raha tsy izany. Ho fanamorana ny fampiasana dia misy fampiharana Grab Taxi ho an'ny iOS и Android.
Manaraka ihany koa Grab Taxi eo an-tsena ary Fiara malemy. Tokony ho tsaroana fa ny taloha dia ny antsasaky ny vidin'ireto farany, fa natao indrindra ho an'ny fitaterana an-trano, raha ny farany dia natao hifindra manerana ny firenena na ny zorony mitokana indrindra ary ananan'izy ireo ny fanariana fiara isan-karazany ho an'ny haben'ny orinasa sy ny poketra.
Mototaxi any Thailand
Taxi Moto ao Thailand
I motosai izy ireo, dia bisikileta miaraka amina mpamily fotsiny. Azon'izy ireo atao fahazoan-dàlana (mpamily amin'ny fehikibo orana na manga), na mety ho mpivarotra tsy miankina izy ireo voarohirohy amin'ny fotoana fitaterana moto. Amin'ireo kitrokely, taxi-be taxi no karazana taxi lafo vidy indrindra, ary mety ihany koa amin'ny fiakaran'ny lozam-pifamoivoizana any amin'ireo tanàna lehibe any Thailand. Ka raha toa ka mila mitondra fiara dia fohy ianao, dia tadidio foana ny taxi-môtô.
Ny vidin'ny kely indrindra amin'ny dia (hatramin'ny 2 km) dia eo amin'ny 25 baht (sahabo ho 80 cents). Izay rehetra omena fanampiny 3-4 baht (10 cents) isaky ny kilometatra.
Tuk Tuk any Thailand
Ity dia fomba iray malaza amin'ny fizahan-tany eo amin'ireo mpizahatany. (exotic, aorian'izay). Ny serivisy eo an-toerana matetika dia tsy ampiasaina.
Sangteo any Thailand
Amin'ny sarany dia mazàna izy ireo no ambany noho ny fiarakaretsaka ao amin'ny counter, fa lafo kokoa noho ny taxi. Misy karazany karazany sy ho an'ny mpandeha maromaro, arak'izay ho hitanao eto amin'ny sary.
Mazava ho azy fa tsy misy resaka resadresaka. Azo antoka koa ny fiarovana, na dia tokony hanome voninahitra ny fahaizan'ny vahoaka Thailand aza isika - tsy dia fahita firy ny lozam-pifamoivoizana, raha jerena ny habetsaky ny fifamoivoizana ambony.
Ary mazava ho azy, aza adino ny mampiaraka sy handrindra ny saran-dàlana mialoha mialoha!
Fiantsonana renirano (renirano Chao Phraya)
Eo amin'ny reniranon'i Chao Phraya sy lakandrano mifanila, lakana kely ply. Ny saran-dalana amin'izy ireo dia miovaova amin'ny 5 ka hatramin'ny 15 baht.
Sarintanin'ireo piera amin'ny renirano
Ny saina dia apetraka eo amin'ny tsipìka isaky ny sambo, ny loko izay mamaritra ny lalana iray voafaritra
Renirano renirano (sambo) misy saina mavo
Sainan'ny manga - sambo fizahan-tany;
voasary, mavo, maitso - sambo tsy mahazatra mijanona amin'ny fijanonana rehetra;
sambo tsy misy sainam-pirenena - mora vidy indrindra, mijanona amin'ny pierna rehetra eny amin'ny lalana
Fanokafana ora fiantsonan'ny renirano iray. fandaharam-potoana
Ireo sambo tsy misy sainam-pirenena: 06:45 - 07:30 ary 16:00 - 16:30 amin'ny faran'ny herinandro ihany. Ny sandan'ny 9/11/13 baht.
Sainan'ny voasary: ​​06:00 - 19:00 isan'andro. Vidiny 14 baht
Sainam-pirenena: avy amin'ny 06.10 - 08.10 ary 16:05 - 18:05 amin'ny zoma ihany. Vidiny 13/20/32
Sainan'ny mavo: 06:15 - 08:20 ary 16:00 - 20:00 ihany amin'ny herinandron'ny herinandro. Vidiny - 20 baht
Salanisan'ny salanisa 5 / 5. Isan'ny isa: 8